Fintim-baovao | mandimby maharo
Posted on 1 October 2012 by Mandimby Maharo
44 no isan’ireo mpikambana ao amin’ilay Filankevitra momba ny Fampihavanana Malagasy, FFM. Samy manana solotena 2 avy ireo faritra 22. Navoakan’ireo avy ao amin’ny komity mpikarakara ny fisafidianana androany moa ny anaran’ireo voatendry ho ao amin’izany rafitra iray amin’ny tetezamita izany. Miandry ny famoahan’ny governemanta ny lalàna mannendry azy ireo amin’ny fomba ofisialy izany izy ireo mba afahany manatanteraka ny andraikitra ho sahaniny. Raha ny fanazavana avy amin’ireo komity mpanomana ireo dia maro tokoa ny asa miandry ireto olona ireto. Tanjona irey ihany nefa no kendrena dia ny hisian’ny fitoniana mialoha ny fifdianana. Tsikaritra koa fa misy tamin’ireo lohandohan’ireo fikambanan mpanomana ireo (CNOSC, FINONA, Ray amandreny mijoro) no lasa mpikambana ao amin’ity filankevitra ity. Tsy ho anisan’ireo izay hilatsaka ho fidina amin’ireo karazam-pifidianana hisy eto amin’ny firenena ananganana ny repoblika fahefatra noho izany izy ireo raha ny fepetra voalazan’ny lalàna no dinihina.
Mikasika izay fifidianana izay indrindra dia manomboka anio ihany koa ny fotoana natokana ho fanisana ireo mpifidy. Dingana izay efa voafaritry ny Ceni-t fa tsy maintsy atao mialoha ny anaovana ny fifidianana. Famerenana manontolo ny lisim-pifidianana moa no tanjona amin’izany mba tsy hisian’ny tsy fahatomombanana toy izay efa nisy tany aloha. Miroso moramora ihany izany ny ny asa sahanin’ny Ceni-t na dia misy aza ny tsy fitoviam-pijery eo amin’ny fanjakana sy ireo mpamatsy vola amin’ny fandohavan’ny tsirairay ny anjara efa nampananteiny fa ho efaina amin’ny fanohanana ity kaomisiona ity.
Mbola ny fifidianana ihany koa no resaka nataon’ny Fat Andry Rajoelina io maraina iço teny am-patongavany teny Ivato avy namonjy ny fivorian’ny Firenenamokambana. “Tsy misy firenena na dia iray afaka manery amin’ny fahafahany na tsia hirotsaka ho fidina… fa manosihosy ny fiandrianam-pirenena izany … ka aoka ny malagasy ihany no hifidy izay tiany hitantana ny firenenY” Io no navaliny ireo fanontanianany amin’izay mety hilatsahany ho fidina. Mandrutra izay koa nefa dia efa nahatety faritra maro ireo lazaina fa iraka avy aminny tarihin’ny praiministra lefitra Hajo Andrianainaharivelo. Taorian’ny Toliara, Faradofay, Toamasina, Dia tany Miarinarivo sy iny faritra Bongolava indray ity delegasiona ity ny faran’ny herinandro teo ka mampanantena ny hanaovana fotodrafitr(asa toy ny lalana , tsena, kianja. Fihetsika izay mampitabataba ireo izay efa nilaza fa hirotsaka ho filoham-pirenena, izay miisa 12 ankehitriny. Lazain’izy ireo moa fa efa fampielezankevitra mialoha sahady izany.
Tags: Andry Rajoelina, FFM, fifidianana, politiqueCategories: politique